Ikhaya / izesekeli / Izinto Zokugeza / Ithoyilethi Lesiphathi Phepha Esibekiwe Kumnyama
Idizayini encane yompompi nezinsiza zeWOWOW kugcwalisa imihlobiso yokugeza yendabuko neyesimanje.
Isihlukanisi esiqinile sephepha langasese elinokuphela okuhle kakhulu.
Kulula ukufaka nokubamba kahle kakhulu. Irowu yamaphepha ethoyilethi ayindizeli lapho uyisebenzisa.
Isiphathi sephepha langasese elimnyama, ingwegwe engaguquki
Ifanele amabhola ephepha ngobubanzi obusele be-110mm
-Sitayela: Umnikazi wephepha langasese
-Body Material: 304 Insimbi Engagqwali
-Qeda: I-Bronze Ekhuhliwe Ngoyela
Indlela Yokufaka: I-Wall Mounted nge-Screws
-1 × Iphepha Lendlu yangasese
-1 × Izinsiza Zokufaka
-1 × Umhlahlandlela Womsebenzisi
Ukwakhiwa kwensimbi engagqwali ephezulu engu-304 kuyenza ingasebenzi ukugqwala futhi kusindise umsebenzi.
Isiphetho se-MATTE BLACK esibucayi asibonisi noma yiziphi izindawo futhi simelana nokuklwebheka kwansuku zonke, ukugcinwa kwansuku zonke kulula, kugcina ukubukeka kwayo okubushelelezi nokungenaphutha kalula.
Ukuma okuyindilinga okuhlukile kungeza izinto zesimanje zokuhlobisa ikamelo lakho, imiphetho yamachaphaza ivikela umzimba wakho ekuklwebheni.
Faka indandatho yethawula nomnikazi wephepha langasese.
Intaba yesikulufi efihliwe, okulula ukuyifaka, ne-hardware efakwayo ifakiwe
I-SKU: 480103DB Categories: Izinto Zokugeza, izesekeli Tags: izinto zokugeza zasendlini, okwamanje, 304 yayo
I-WOWOW faucet Isixhumi se-Hose